“Waxa dagaalameyey waxaa ay ahaayeen xoogaga xoraynta SSC” Col. Cali Sabarey. – Radio Daljir
“Waxa dagaalameyey waxaa ay ahaayeen xoogaga xoraynta SSC” Col. Cali Sabarey.
Tukaraq, Jun 01 – Ku xigeenka hoggaanka SSC Col. Cali Sabarey ayaa sheegay in dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay duleedka Tukaraq uu dhex maray xoogaga SSC iyo ciidamada Somaliland.
Col. Sabarey waxaa uu sheegay in weerar lagu soo qaaday, iyana ay difaac galeen, jabiyeena ciidankii duulaanka ahaa; waxaa uu intaas ku daray in ciidankoodu ay had iyo jeer heegan yihiin.
Col. Sabarey waxaa kale oo uu sheegay in ay jiraan kulamo dhex maray isaga iyo saraakiil ka tirsan ciidanka Puntland ee fadhigoodu yahay gobolka Sool.
Warar is-khilaafsan ayaa ka soo baxay dagaalkii 30-ii bishii May ka dhacay agagaarka tuulooyinka Gambadhe & Higlada oo dhinaca galbeed ka xigta Tukaraq.
Axmed Cilmi Karaash, wasiirkii hore ee duulistqa & garoomada ee Puntalnd oo in dhawaale hogaaminayey ciidamo fadhigoodu yahay bariga gobolka Sool ayaa beeniyey in dagaalkii ka dhacay Tukaraq ay ku lug lahaayeen xoogaga SSC, balse dagaalku uu dhex maray ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland.
Wasiirka warfaafinta ee Puntland Axmed C. Askar oo saxaafada la hadlay ayaa sheegtay in dagaalku uu dhex maray ciidanka Puntland iyo kuwa Somaliland, kuna eedaysay xoogaga SSC in ay xasilooni darro ka wadaag gobolka, ayna doonayaan in ay iska hor keenaan labada maamul ee Puntland iyo Somaliland.
Taliyaha ciidanka Somaliland Nuux Taani oo isna saxaafada la hadlay ayaa sheegay in dagaalku uu dhex maray ciidankooda iyo huwan uu sida uu sheegay ka kooban SSC iyo Puntland.
Waxaa uu intaas raaciyey Nuux Taani in xoogaga SSC ay doonayaan in ay isku dhuftaan ciidamada Somaliland iyo Puntland, isaga oo ka digay in la iska hor keeno labada ciidan.